Justice for Victoria ??? | Monywa Gazette
Home ဆောင်းပါး Justice for Victoria ???
Justice for Victoria ???
ကျနော် အမေရိကန်နေတုန်းက တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ကိုလံဘီယာမြို့ကလေးက မိတ်ဆွေတယောက် အိမ်မှာ သွားတည်းနေတယ်။ မိတ်ဆွေက ကုန်တိုက်တခုရဲ့ ကော်နာမှာ ဆူရှီဆိုင်ကလေးဖွင့်ထားတယ်။ ကျနော်လည်း တခါ တလေ သူ့ကိုလုပ်ကိုင်ကူရင်း၊ ခပ်လွယ်လွယ်ဆူရှီမျိုးတော့ လိပ်တတ်လာတယ်။ ပြောချင်တာက အဲဒီကုန်တိုက်မှာ အရောင်းစာရေး လူငယ်ကလေးတယောက်ရှိတယ်။ သူက သူများနဲ့သိပ်မရောဘဲ ခပ်ကင်းကင်းနေတတ်တယ်။ သူ့အမေ လည်းကုန်တိုက်က ဝန်ထမ်းတယောက်ပဲ။ နောက်တော့မှ သိရတာ သူက သက်ငယ်လိင်မှုကျူးလွန်ထားတယ်။ ပြောတာ တော့ အလိုတူအလိုပါ ဖြစ်ပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် အသက်မပြည့်သေးတော့ ကလေးသူငယ်လိင်မှု (child sex) ဖြစ်သွားတယ်။ ကောင်မလေးကတိုင်တော့ သူလည်း လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းရောက်။ အခု ပြန်လွတ်လာသည့်တိုင်အောင် လူတော မတိုးရဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ဘဝအကြောင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးကဒ်ပြား (social security card) ရာဇဝင်မှာ ဒီပြစ်မှုက ဖျက်မရ အောင် ထင်သွားတယ်။ အခုအချိန်တိုင် ခြေကျင်းဝတ်နဲ့နေရတုန်းပဲ။ သူမသွားဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်။ ခြေကျင်း ကနေ ဝိုင်ယာလက်စ်စနစ်နဲ့ ရဲစခန်းကို သတင်းပို့နေတယ်။ ရာသီဥတု မကောင်းတဲ့နေ့များဆိုရင် သူရှိရာနေရာကို ရဲစခန်း က မမြင်ရဘူး။ ကုန်တိုက်ကို ဖုန်းဆက်လာရင်၊ သူက ကုန်တိုက်အပြင်ထွက် သူရှိနေပါကြောင်း ပြသရတယ်။ ဆိုလို တာက ကလေးသူငယ် လိင်ပြစ်မှုဘယ်လောက်ကြီးကြောင်း ပြောချင်တာ။
တခါ ဒင်းဗားအစိုးရကျောင်းများ (Denver Public Schools) ရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေး ဖူးတယ်။ အကြောင်းက ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်မိသားစုတွေ ဒင်းဗားပြည်နယ်ကိုရောက်လာတော့၊ ကျောင်းစည်းမျဉ်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေကို အားလုံးသိအောင် မြန်မာလိုပြန်ပေးထားတာ။ အဲဒီမှာ မှတ်မှတ်ရရ ဗိုလ်ကျမှုဆန့်ကျင်ရေး (anti-bully) စည်းမျဉ်းတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပါတယ်။ ကျောင်းကားပေါ်မှာ၊ စာသင်ခန်းထဲမှာ၊ ကျောင်းပုရဝုဏ် ထဲမှာ ကလေးကြီးက ကလေးငယ်တွေကို ဗိုလ်ကျတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အနိုင်ကျင့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီမှာ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်မှု လုံးဝသည်းမခံကြောင်း (zero tolerance policy) မူဝါဒကို အတိအလင်း ကြေညာထားတယ်။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေ ပါတယ်။ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှု အမူအကျင့် (bullying behavior)၊ အနိုင်ကျင့်သူတဦးကို ဘယ်လို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်မလဲ။ ဘေးက ရပ်ကြည့်နေသူတဦးက ဘယ်လိုတာဝန် ရှိသလဲ။ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့် မှုကြောင့် နစ်နာရသူ သားကောင်နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမှု တွေ လုပ်နိုင်မလဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းလမ်းများ (Mental toughness techniques)၊ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နည်း၊ တာဝန်ယူနည်း (self-control, self-responsibility and self-reliance) ကိစ္စတွေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းတွေမှာ မူဝါဒ ရှိပါရဲ့လား။
တလောက သတင်းတပုဒ်ဖတ်ရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ DTAC ဒီတက်ခ်ခေါ်တဲ့ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီနဲ့ ချူလာ လောင်ကောင် တက္ကသိုလ်တို့လုပ်တဲ့ သုတေသနစာတန်းတခု အကြောင်းပါ။ ဆိုတာကတော့ ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်မှုဟာ ဆက်နွယ်မှုရှိနေကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ သုတေသနစာတန်းနာမည်က “Forms of Bullying Among High School Students in Bangkok” ဘန်ကောက်ရှိ အထက်တန်းကျောင်းသားများတွင် အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှု ပုံစံများ ဆိုတဲ့ စာတန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ၇၀% က စာသင်ခန်းအတွင်းမှာ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်မှု ၂-၃ ခု ကြုံတွေ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်း ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ၃၀% လောက်က လိင်စိတ်ကွဲပြားသူ (LGBT victim) တွေ အပေါ် အွန်လိုင်းကနေ နှုတ်အား၊ လိင်မှုအားဖြင့် အနိုင်ကျင့်မှု (cyberbullying) ကြုံတွေ့ဖူးတယ် ဆိုပါတယ်။ ထိုင်း ကျောင်းတွေမှာ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှု ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိနေသေးပြီး ကာကွယ်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကျနော် ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာ စာသင်မယ်ဆိုတုန်းက နိုင်ငံခြားကလာရင် Teaching visa အတွက်၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ ယူခိုင်းတာလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံခြားသားဆရာတွေထဲမှာ ကလေးတွေလိင်ကိစ္စ မုဆိုးတွေ ဝင်ရောလာမှာကို ကာကွယ် လိုတာပါပဲ။
အဲဒါအပြင် ဒီတက်ခ် (DTAC) ဖုန်းကုမ္ပဏီကလည်း ကလေးတွေအတွက် လုံခြုံတဲ့အင်တာနက် ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်လာပါ တယ်။ Safeinternetforkid.com ဆိုဒ်ကနေ မိဘတွေအတွက် ကလေးလုံခြုံရေး သင်ခန်းစာတွေ ပို့ချမှုတွေ လုပ်လာပါ တယ်။ ဆရာတွေနဲ့ မိဘတွေက ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကလေးသူငယ် လိင်ကိစ္စ ဆိုရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။
ကျနော် စဉ်းစားမိတာ။ ကျနော်တို့ဆီက ကျောင်းတွေမှာ ကလေးသူငယ် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှု တားဆီးရေး မူဝါဒများ ရှိပါ သလား။ ကျောင်းတွေမှာ ဘယ်လိုစည်းကြပ် ကာကွယ်ပါသလဲ။ နေပြည်တော်က ကလေးမလေးတဦး မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ ကျောင်းဆိုရင် ရဲတွေက ကျောင်းမှာနောက်နောင် ဒီလိုမဖြစ်အောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Special Operation Procedure) တွေ စစ်ဆေးပါသလား။ ကျော်စောမှု ရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းလိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမျိုး လုပ်ပါ သလား။ နေပြည်တော်က မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကရော ကျောင်းကို ကလေးသူငယ် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှု တားဆီးရေးကိစ္စ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးမှု၊ ညွှန်ကြားမှုများ လုပ်ပါသလား။ ကလေးမလေးအတွက် တရားမျှတမှုကရော နောက်ကျနေမှာလား။ (Justice delay is justice denied.) တစ်လခွဲကျော်ကြာတိုင် အမှုစစ်ဆေးတာ မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ စိုးရိမ်နေကြတာ မဆန်းပါဘူး။
(ထပ်ဖြည့်- အမေရိကားက ကျနော့်မိတ်ဆွေက ထပ်ဖြည့် ပြောလာပါတယ်။ ကလေးလိင်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေး ဟာ အခုတိုင် ပညာပေးသင်တန်းမျိုး တက်နေရဆဲပါ။ ကျောင်းတက်နေရ ပညာပေးကျောင်း) No internet, No computer, No cellphone ပါ။ ကိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။)
Previous articleကြေးမုံရွာ ရိုးရာကြေးပန်းတဉ်းလုပ်ငန်း ပျောက်ကွက်လု ဖြစ်နေ
Next articleလျှပ်စစ်မီတာခကို ကျော်လွန်